Public Kura | » भन्ज्याङको चौतारो भन्ज्याङको चौतारो – Public Kura
यतिन्जेलसम्म उनी मसँग बोलेका थिएनन् र म पनि उनीसँग बोलेको थिइन । मैले उनको अनुहारतिर दृृष्टि पुर्याएँ । बुढेसकालका चिन्हहरू प्रष्ट देखिएका थिए । अनुहारको छालामा मुजा परिसकेको थियो अर्थात् उनलाई बुढेसकालले गाँजिसकेको थियो । निकै थकित, गलित देखिएका थिए । जिन्दगीको ठुलै भारी लतारिसकेको शरीर दुब्लो, पातलो पनि थियो । घाँसको भारीले उनलाई थकाएको थियो । यसै अर्थमा उनी केही बेर सुस्ताएपछि बोल्ने विचारमा थिए सायद् !
‘पौडेलहरुको गाउँमा एक जना मात्रै लम्साल ! त्यसो भए हजुरको पुख्र्यौैली थलो यो होइन होला ?’ मैले मेरो मनमा पलाएको जिज्ञासा पोखेँ ।
‘२०५२ सालको घटना बाबु ! सम्झेर ल्याउँदा यो मन धरक्क हुन्छ । साउन मैना थियो । लगातार चार दिनसम्म झरी पर्यो । चारै दिनसम्म घामको मुख पनि देख्न पाइएको थिएन । बर्खामासको खेती लाउने समय । झरीले गर्दा मान्छेहरू घरभित्रै थुनिएका थिए । फाटफुट गाईभैँसीलाई घाँस काट्न निस्कनेबाहेक अरु काममा निस्कन सकेका थिएनन् । पाखो बारीमा कोदो रोप्ने समय थियो । कोदाको बिउ बुढिँदै गा’को थियो । झरीको अन्तिम दिन पानी सिमसिम परे पनि केही मत्थरिएको अवस्था थियो । म ऊ त्यै पारिको माथिल्लो गाममा कोदो रोप्ने खेताला पाइन्छन् कि भनेर गएँ’, बूढाले दायाँ हातकै चोरी औँलाले पहिरो गएभन्दा केही माथिपट्टिको गाउँतिर सङ्केत गरे ।
बुढाले ख्वाक्क खोके र कफै निकालेर चौताराबाट तलतिर थुके । अनि फेरि बोल्न थाले, ‘यस वरिपरिको भेकमा चौध जना त मान्छे नै मरेका थिए बाबु ! तर मलाई जस्तो ठुलो बज्रपात त कल्लाई पर्यो र ! श्रीमती र दुइटा छोराछोरी खाएको हो बाबु ! त्यो पैराले ! बिहानको समय, म त्यै माथिको गाममा थिएँ । धेरै नै बेरसम्म आकाश गर्जेजस्तै गड्याङगुडुङ गर्दै ठुलो आवाज आयो । हेर्दाहेर्दै सिङ्गो गाम नै बगायो, पुरिएका मान्छे पनि सप्पै भेटिएनन् । ठुली छोरी र मलाई बाँच्न लेख्या रैछ । त्यति बेला ठुली दस कक्षामा पढ्थी । असार–साउनको बर्खे छुट्टीमा टिउसन पढ्न भनेर मामाघर बसेकी थिई ।’
‘माथिबाट खोलासम्म झर्नै पर्यो अनि यतातिरको यो उकालो चढ्दा ठ्याक्कै डेढ घन्टा लाग्छ बाबु !’मेरो जिज्ञासा मेटाएपछि बुढाले विगतको उही घटनालाई निरन्तरता दिए, ‘हेलिकप्टरबाट मन्त्री झरे । खाइलाउदा थिए । हामीले भोट हालेर जिता’का सांसद् पनि मन्त्रीसँगै आ’का रैछन् । उनीहरुले उः त्यै छेउबाट दुर्पिनले पारि पाखामा मेरो घरलाई बगा’को पैरो हेरे । फोटा पनि खिचे । मैले आजसम्मको जिन्दगीमा आफ्नै अगाडि मन्त्री देखेको त्यै एकपटक हो ।’
‘मन्त्रीले पैला त रुमाल झिकेर आफ्ना आँखा पुछे अनि हामीतिर फर्केर तिनले भनेका थिए– जे हुनु भैहाल्यो, अब तपाइँहामीले चिन्ता गरेर गइसकेका मान्छेलाई फर्काउन सकिने पनि होइन । चिन्ता नलिनुस् । मैले तपाइँहरू जजसको घर बग्यो र जो जो अझै पनि जोखिममा हुनुहुन्छ, सबैका लागि मधेसतिर जग्गा खोजेर बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेछु । म फर्केर काठमाडौँ पुग्नासाथ सुरुमा तपाइँहरुकै राहतका लागि व्यवस्था गर्नेछु । अहिले तत्कालका लागि भने दुई/तिन दिनभित्रै गाविसमार्फत तपाइँहरुलाई केही आर्थिक सहयोग हुनेछ’, बुढाले मन्त्रीको भाषा सुनाए ।
‘केको सयोग गर्नु नि बाबु ! मुखले मत्रै सयोग गर्या’ रै’छन् । बेभारमा त त्यस्तो खासै पाइएन ।’ बूढाले आफ्नै कुरालाई पुनः निरन्तरता दिए, ‘अनि हेलिकप्टर फक्र्यो । मन्त्री फर्केको डेढ महिनापछि जिल्लामा राहात कि के जाती पाइने भो’ भनेर यै गाउँका अध्यक्षले हामी पीडितहरुलाई जिल्लामा लिएर गए । मेरो भागमा जम्मा आठ हजार रुपियाँ प¥या’थ्यो । लगभग दुई मैना त अर्कैको गोठ बारेर बसेँ । त्यसपछि भने पैला घर भएभन्दा क्यै पूर्वपट्टि आफ्नै अलिकति पखेरो बारी बाँकी थियो । त्यहीँ एउटा झुप्रो बनाएँ । आठ हजारले त केको पुग्नु नि ! त्यो आठ हजार त खानीपकाउनी भाँडाकुँडा र क्यै लुगाफाटो जोड्दैमा ठिक्क भो । माथि गाउँकाले सयोग गरेर बनाइदे’का थे’ त्यो झुप्रो पनि । विचराहरुले सयोग पनि कतिलाई गर्नु, मेरो मत्रै भए पो ! सात परिवारका त घरै बगेका थिए ।’
बूढाको कुरा सुनेपछि मेरो दिमाग एकाएक सिंहदरबारमा पुग्यो । क्रमशः बालुवाटारमा पनि पुग्यो । भित्रभित्रै रिस उठ्यो । रिसलाई जबरजस्ती भित्रै दबाएँ । घाम पश्चिमतिरको पहाडबाट डुब्यो । मलाई अझै डेढ घन्टा जति उकालो हिँड्नु थियो । अब भुल्नु हुँदैन भनेर चौताराबाट उठेँ र बूढासँग बिदा भई आफ्नो बाटो लागेँ । by nepalisahityaghar